Soo -saareyaasha & Alaab -qeybiyeyaasha Qalabka Mukhaadaraadka & Baadhitaanka - Warshadda Qalabka Qalabka Baarista iyo Baarista ee Shiinaha
Dawaarle- Mashiinka Dheelitirka Horizontal-ka Ah
Waxaan soo saari karnaa mashiinnada dheelitirka sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha. Ku soo dhowow inaad ii sheegto shuruudahaaga xigashada.
Mashiinka isku dheelitirka firfircoon ee caalamiga ah
ZHHIMG waxay siisaa jaangooyooyin caadi ah mashiinnada dheelitirka firfircoon ee wadajirka ah ee caalamiga ah oo isku dheellitiri kara rotors -ka oo culeyskoodu yahay 50 kg ilaa ugu badnaan 30,000 kg oo leh dhexroor 2800 mm. Soo -saare xirfadle ah, Jinan Keding wuxuu kaloo soo saaraa mashiinno dheellitiran oo firfircoon oo siman, kuwaas oo ku habboon dhammaan noocyada rotors -ka.
Wheel Scroll for Mashiinka Dheelitirka.
Shaqada Wadajirka Universal waa in lagu xiro mashiinka shaqada iyo mootada. Waxaan kugula talin doonaa Wadajirka Caalamiga ah sida waafaqsan qalabka shaqada iyo mashiinka dheelitirka.
Mashiinka Dheelitirka Tooska ah ee Gawaarida Baabuurka
Taxanaha YLS waa mashiinka dheelitirka firfircoon ee toosan ee laba-dhinac leh, kaas oo loo adeegsan karo cabbirka dheelitirka firfircoon ee laba-geeslaha ah iyo cabbirka dheelitirka maaliyadeed ee hal dhinac ah. Qaybo ay ka mid yihiin daab taageere, daab hawo, hawo -mareenka baabuurka, xajin, disc biriiga, xarunta bareega…
Mashiinka Dheelitirka Toosan ee Dhinac Kaliya YLD-300 (500,5000)
Taxanahaani waa mid aad u badan oo golaha hal dhinac ah mashiinka isku dheelitirka firfircoon ee toosan ayaa loo soo saaray 300-5000kg, mashiinkani wuxuu ku habboon yahay qaybaha wareegga diskka ee hal dhinac hore u hubinta dheelitirka dhaqdhaqaaqa, duulimaad culus, gawaarida, bamka bamka, matoor gaar ah iyo kuwa kale qaybo…
Waxaan bixin karnaa barkimaha shilalka ee warshadaha waxaanan ka caawin karnaa macaamiisha inay ku urursadaan qeybahaan taageero birta ah.
Waxaan bixinnaa xalal warshadeed oo isku dhafan. Adeegga joogsiga ahi wuxuu kaa caawinayaa inaad si fudud u guulaysato.
Ilaha hawadu waxay xalliyaan dhibaatooyinka gariirka iyo buuqa codsiyo badan.
Kooxda Wax -soosaarka Caqliga leh ee ZHongHui (ZHHIMG) waxay ka caawin kartaa macaamiisha inay isku keenaan mashiinnada dheelitirka, oo ay ilaaliyaan oo hagaajiyaan mashiinnada dheelitirka goobta iyo internetka.
Sax Granite, Qalinka Granit Square Ruler, Isbarbar dhigyada Granite Precision, Sax Granite Cube, La taaban karo Epoxy, Sax Granite dusha sare,